OpenSUSE 13.1 waa kan | Laga soo bilaabo Linux
Shalay, Nofeembar 19, sawirka deggan ee nooca 13.1 ee qaybinta ayaa la sii daayay furanSUSESiidayntaani waa nooc Evergreen, sidaa darteed waxay yeelan doontaa taageero dheeri ah.
Muddada rasmiga ah ee taageerada waxay ahaan doontaa illaa Maajo 1, 2015 nooca caadiga ah, iyo illaa Noofembar 1, 2016 ee Evergreen 13.1.
Noocani wuxuu la yimaadaa horumarin iyo astaamo badan. Sida laga soo xigtay kooxda OpenSUSE, qalabka baaritaanka otomaatiga ah fur furan Waxay soo martay dhowr horumar.
Isla sidaas ayaa ku dhacday nidaamka faylka btrfs, taas oo horeyba loogu tixgeliyey inay xasilloon tahay isticmaalka maalin kasta. Waxay la timaaddaa nooca ugu dambeeyay ee Havana, iyo cusbooneysiin Ruby 2.0 en Gawaarida 4.
GCC ayaa lagu rakibay nooca 4.8, oo ay weheliso glibsc cusub oo lagu taageerayo C11 y C ++ 11. Qalabka yaad ayaa la geeyay Ruby, iyo mashiinka qorista qoraalka waa Nooca Bilaashka ah 2.5.
Marka laga hadlayo khibrada guud ee isticmaalaha, sawirada ayaa la taageeri doonaa VDPAU en MIIS; aaladaha Android waxay yeelan doontaa is dhexgal buuxa oo kujira maareeyaha faylka, qolof iyo ciyaariyahan Amarok.
Tikniyoolajiyada Tijaabada la Isticmaalay waxaa ku jira taageero hordhac ah oo laga helo Wayland con Weston en GNOME Shelliyo Plasma Desktop de KDE.
Waxaan soo degsan doonaa sawirka si aan u tijaabiyo nuqulkan, dhawaana waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa FromLinux. ISO-yada furanSUSE 13.1 waxaa laga soo dejinayaa xiriirka soo socda:
Soo degso furanSUSE 13.1
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » OpenSUSE 13.1 waa kan
Waxaan horeyba u soo dajiyay shalay oo aan hadda rakibay si aan u arko !!!!!!!
Sugaya dib u eegistaas 🙂
Uff taas oo xaasid ah, waxaan rajeynayaa inay ku ridayaan MES repo
Jawaab ar @ y
Waxaan ku tijaabiyay beta, runtiina indhahaygu ma qaban.
Awoodda Openuse waa la ogaan karaa markaad si isdaba joog ah u isticmaasho waxaadna arkeysaa inaadan rarneyn ama aadan rabin, wax walbana waxay leeyihiin isku xirnaan kuwa kale jeclaan lahaayeen. hadaan loo furin, wax fikrad ah kama haysto waxa ay u adeegsan karto diro kale
Ku jawaab gecko
Waxaan jebiyey dhowr jeer xD, meelaha keydka loo dhigaa xitaa wey ka kalsooni yar yahiin ubuntu ppa, waxaad ku lug yeeleysaa yast waxayna bilaabeysaa inay ku weydiiso inaad tirtirto waxyaabaha waxtarka leh.
Isaga laftiisa waa mid aad u deggan, laakiin haddii ay run tahay inay jahawareer ku keydsan tahay bakhaarrada ... Shakhsiyan tan iyo markii aan joogo Arch / Manjaro / Chakra, ma dhaqaaqin ....
Markii aan istcimaalay waxay noqotay mid aan degganayn markii la isticmaalayo 'Tumbleweed repos', taas oo ah waxa kaliya ee aan doonayay inaan waayo-aragnimo u yeesho sida distros-ka aad sheegayso, laakiin sida muuqata OpenSUSE waxaa fiican inaad isticmaasho kuwa weligood cagaaran (oo u dhigma Ubuntu LTS, sida noocaan).
Hagaag, horeyba waa lug xun. U fiirso inaan barnaamijyo soo mariyay http://software.opensuse.org/packages/ oo waxaan ka cusbooneysiinayey 11.1 ilaa 12.3 iyo dhibaato la'aan, laakiin had iyo jeer, qof walba wuxuu leeyahay khibrad u gaar ah.
Waxaa intaa dheer, Adeegga Furan ee Furan, waxay noqoneysaa wax fudud (xigashooyin, waxay leedahay curve waxbarasho, sida wax kasta oo kale) si aad u maamusho rpm-kaaga (ama deynta, wax kasta oo aad rabto!) Bakhaarkaaga u gaarka ah. Waxaan u arkaa inay tahay qalab aad u wanaagsan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, keydka bannaanka ayaa had iyo jeer aan la isku halleyn karin, ka dib dhammaantood waxaa sameeya qof / koox dad ah oo laga yaabo (ama laga yaabo) inay fikrad ka qabaan waxa ay sameynayaan, nidaamkuna wax shaqo ah kuma laha sidoo kale (noqo PPA ama openSUSE) ... runti, waxaan u maleynayaa in nidaamka loo yaqaan 'OpenSUSE' uu aad uga sareeyo, waxaad gujisaa barnaamijka, wuxuu kuu sheegayaa inuu kudarsanayo meel lagu keydiyo, halkaasna waad ku haysataa .. Fikradayda, waxay u baahan tahay oo kaliya in lagu daro maareynta Yast ee desktop-ka, si aan iyaga looga raadin kaliya shabakadda.
uma shaqeeyo sidii ilo wareed.l
Maya, maxaa yeelay haddii kale waxay ahaan laheyd debian ama ku saleysan debian.
Laakiin haddii aad rabto inaad ku aragto meelaha lagu kaydiyo iyo xulashooyinkooda OpenSUSE, marwalba waad sameyn kartaa tan:
Waxaa ku kaydsan feylal bakhaar kasta, waxaad samayn kartaa keyd haddii aad rabto, bisad mid walba waxay tusaysaa qaabkeeda, iwm.
Codsi kasta (tusaale ahaan maamulaha softiweerka Yast2) oo ku saleysan zypper wuxuu adeegsadaa feylashaan si uu u helo macluumaadka boggaga halka xirmooyinka laga soo dejiyo.
Waxaan u maleynayaa inaad si fiican u sameysay, maxaa yeelay si kasta oo aan loo aamini karin keydadka dibedda, Yast ayaa kugu digaya marwalba haddii wax la jabin karo. Ma aqaano waxa aad isku dayday inaad rakibto ama meesha aan kaa weydiisto inaad tirtirto xirmooyinka lagama maarmaanka ah, laakiin ugu yaraan meelaha ugu badan ee lagu keydiyo bulshada, waxaan kuu sheegayaa inaysan u burburin sida oo kale.
Waa hagaag, waxay u egtahay mid wanaagsan …laakiin qaabka LIVE ma awoodin inaan Wi-Fi shaqeeyo work mana lahan Wi-Fi-ka laptop-ka kujira ama anteenada Wi-Fi ee USB-ga ah external
inta kale ee hargabka ... waxay gartaan wax walba si otomaatig ah ... WALIGIINA ma awoodin inaan sameeyo shaqo la furo ... oo waxay umuuqataa in noocani uu lamid noqon doono ...
Xaqiiqdii aniga ayaa khaladkayga leh ..
Ku jawaab falangista33
Ma isku dayday inaad ka soo dejiso yast-ka?
OpenSUSE asal ahaan wuxuu u adeegsadaa ifup xiriirka, laga bilaabo yast waad beddeli kartaa qaabeynta si ay u maamusho maareeyaha shabakadda
Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay khayaano Live ah (Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay nooca KDE, ma ogi haddii ay ku dhacdo Gnome), marka OpenSUSE la rakibo waa inaad ka shaqeysaa xiriirada wireless-ka astaanta guddiga (waa wax ku jira dhammaan nidaamyada hawlgalka, uma maleynayo waxay qaadataa in ka badan 1 seken si loo helo) oo dib loogu bilaabo.
Maxaa khaas ah oo ku saabsan BTRFS oo ku saabsan ext4?
CoW, qaybo-hoosaadyo, si kooban oo kooban, hubinta sharafta xogta.
Is khilaafsan, waxa ugu fiican ee ku saabsan OpenSUSE waa dhab ahaan waxa igu kallifaya inaan ka fogaado dariiqadan: Yast2.
Ma aqaano sababta, laakiin mar kasta oo aan isku dayo waxaan dareemaa inay wax ka maqan yihiin .. ama waxaan u arkaa mid aad u culus, sidii inay tahay maroodigii ..
Oo taxaddar, waan ogahay inay tahay qaybin aad u wanaagsan, laakiin ma ogi ... wax ayaa leh oo aan si fiican ii xiri karin (ka sokow anigu ma ahi taageere rpm).
Anigu ma ihi taageere badan .rpm sidoo kale. Anigu waxaan ahay taageere .deb, .pkg.tar.gz, .pkg.tar.xz iyo .txz.
Ed Iyo tafatirayaasha badankood: p
Xulashada rpm vs deb waxay la mid tahay kan jecel casaanka ama buluuga, ma laha saldhig tiknoolajiyadeed laakiin waa mid dareen leh, ama laga yaabee mid taariikhi ah haddii mid ka mid ah dadka jooga ay ku dhacday rpmhell caan ah oo jirkooda ah, mana jirin wax qumman maareeyayaasha ku-tiirsanaanta iyo dadku waxay ku rakibeen fedora rpm gudaha SUSE sida waalan ee bogagga internetka si loo arko haddii la tuuray (lafta rpm, sidee xun ayaad sameysay!), taasoo horseedaysa musiibooyin.
Waqtigaan la joogo, uma shaqeeyaan si ka xun ama ka wanaagsan, waa qorshayaal kala duwan oo ku saabsan sida feylasha loogu qaabeeyo fayl kale (u wac deb ama rpm). Waxay leeyihiin xoogaa khilaafaad ah, midna wuxuu leeyahay faa iidooyin uusan mid kale lahayn. Laakiin markay tahay rakibidda dep ama rpm, kuwa xadhigga ka jaba waa maareeyayaasha ku-tiirsanaanta (apt-get, yum, zypper…) ee maareeya. Anigana, zypper (midka aan isticmaalo) ma haysto wax aan ku hinaaso inuu helo-helitaan, laga yaabee xawaaraha noocyadii hore, laakiin hadda, way fiican tahay.
Isbarbardhiga labadan nidaam, waxaan aad uga dheregsanahay dadka kuu sheegaya: 'Waa hagaag, rpm -f waa wax laga yaqyaqsoodo oo weliba sidee qabow u habboon yahay-loo helaa ...', halkaasna durba waxaad ku jirtaa ojiplático, maadaama ay isku wareersan yihiin maareeyaha Ku-tiirsanaanta (apt-get), oo la socota xirmada, waxay umuuqataa inay wax waliba socdaan marka ay timaado burburinta xirmada rpm, inta badanna waa wax aan jirin.
Marka la soo koobo, xulashada inaad u isticmaasho mid ka mid ah distoorka iyo mid kale baakadka / ku tiirsanaanta maareeyaha ee aad hadda isticmaasho waxay ila tahay wax aan macno samaynayn ama aan lahayn saldhig tiknoolaji, illaa ay ku haysato barnaamijyo aad u yar oo ku jira xirmooyinka / keydadka la xushay wuxuu kaa horjoogsanayaa inaad isticmaasho barnaamijyada aad u baahan tahay, taas oo aan u maleynayo inaysan ahayn kiiska OpenSUSE, oo si wanaagsan loo nafaqeeyo.
Ma fiicantahay? Ma leedahay barnaamijyada aad u baahan tahay? Hagaag hore u soco ...
Taasi waa waxa aan u malaynayo. Waa inaanan fahmin ka doorbidida hal nooc oo baakado ah ama mid kale. Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay.
Hagaag, ma fahmin xaqiiqda ah inaan taageere u nahay nooc gaar ah oo xirmo ah, markii lagu rakibo si isku mid ah: S
Si kastaba ha noqotee, waxaan ka helayaa RPM koronto aad u xiiso badan, taas oo ah Delta-RPM, taas oo ka dhigaysa cusbooneysiinta xirmooyinka kala duwan mid fudud.
Waan jeclaa Yast, xitaa marka la eego xulashooyinka qaabeynta waxaan u arkaa inay ka sarreyso guddiga xakamaynta Windows 7.
Waxay umuuqataa mid aad ufiican ama uguyaraan waxaa jira buunbuunin badan oo loogu talagalay qaabkan (inkasta oo waliba ay umuuqato mid wanaagsan), dib u eegis aad uwanaagsan meelwalba.
Waxa kaliya ee aan dhihi karo YaST waxay hagaajin kartaa wax quruxsan (way fiicnaan laheyd haddii ay u egtahay sida guddiga Mageia / Mandriva / Mandrake) laakiin runta maahan wax runtii muhiim ah.
Haa haa, halkaas waad saxantahay .. Waxaan rajeynayaa hadda in noocani loo haajiray ruby ​​(ka hor inta uusan ku jirin luqad aad u qariib ah), waxaan rajeynayaa in hadda dad badani ay iskaashi sameyn karaan oo ay tuuri karaan fiilo maadama ruby ​​yahay luqad aad u caan ah, ku dar modules, turxaan kuwa jira, iwm.
Waa mid ka mid ah waxyaabihii aan isku dayay markii aan go'aansaday inaan u wareego Linux. Inkastoo inkasta oo aan aakhirkii dejiyay debian maxaa yeelay waxay igu habbooneyd wixii aan raadinayay, waa inaan qiraa in OpenSuse ay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu qurxoon ee jira ee jira (haddii uusan ahayn tan ugu badan) yaastuna waa farxad 🙂
Waan jeclahay Furan !!!, waa hubaal inay hagaagayso….
Kahor markii aan sidoo kale jeclaa inaan isku dayo distros hehehe waan isticmaalay Furan runtiina waa inay tahay wax weyn distro, laakiin ugu dambeyntii waxaan jeclahay .deb badan
Markaad dhahdo waad jeceshahay .deb sifiican, ma waxaad u jeedaa nidaamka xirmada ama disto laga keenay Debian? maxaa yeelay hadday ta hore tahay, sidaan kor ku soo faallooday, wax farsamo oo aasaasi ah uma heli karo.
Waxay u egtahay mantra diineed oo lagu rakibay maskaxda dad badan:
-deb ayaa ka roon rpm.
-maxaa yeelay? Sabab isii
- maxaa yeelay waxay ku yiraahdaan banaanka, inaadeerkay baa ii sheegay oo waxaan ka akhriyay khadka tooska ah.
Waan fahmi karay inay kuu sheegeen noocyadan hadalada ah 8 ama 10 sano ka hor, sababtoo ah apt-get waa nidaam weyn laakiin, sidaan idhi, dhowr sano waxaan haysanay zypper u shaqeeya sida soo jiidashada.
Shakhsi ahaan, waxaan ka helay YaST waxa ugu fiican ee ku saabsan OpenSuSE weligayna ma garanayn sababta aan loogu soo haajihin qashin kale. Haysashada dhammaan qaabeynta nidaamka hal meel waa midka ugu raaxada badan isticmaalaha.
Distro aan jeclahay laakiin taasi marwalba waxay kudhameysaa caajis ma garanayo sababta xS
Qaab dhismeed heer sare ah. Aad u deggan oo si sahlan loo isticmaali karo.
Dhalasho Wacan Sandy